नेपाली कांग्रेस, चौधौं महाधिवेशन र पार्टी सत्ता हस्तान्तरणको संक्रमण | ImageKhabar <!-instant articles-->
नेपाली कांग्रेस, चौधौं महाधिवेशन र पार्टी सत्ता हस्तान्तरणको संक्रमण
नेपाली कांग्रेसमा अहिले तेह्रौं महाधिवेशनबाट आएका नेताहरुले पार्टी सत्ता चलाइरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा सभापति छन् । उनैसँग चुनावी प्रतिष्पर्धा गरेका रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला आफुलाई सभापतिभन्दा कम आँक्दैनन् । कांग्रेसको जीवनलाई नियाल्दा उ इतिहासकै गम्भीर र संक्रमणकालीन समयमा देखिन्छ ।
२०७२ साल फागुनबाट चार वर्षका लागि सभापतिमा निर्वाचित देउवा निर्धारित समयमा महाधिवेशन गराउनेभन्दा विधानको व्यवस्थालाई ढाल बनाउँदै कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गराइरहेका छन् । त्यसमा केन्द्रीय समिति ताली पिटेर बस्छ । सबै दूधका साक्षी बिरालो बनेका छन् ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनले पार्टीको हैसियत कट्टीमुनी ह्वाङगै बनाइदिँदा कसैमा जिम्मेवारीबोध देखिन्न । कसले कसलाई अपजसको माला भिराउने भन्ने खेलमा दुई वर्ष बित्थामा गुज्रिसकेको छ । परिणाम सदन र सडक दुबैतिर कांग्रेस निष्प्रभावी छ । नैतिक मूल्य सकाएपछि विरोधकै आवाजले पनि आफैलाई गिज्याउँदो रहेछ । नेतृत्वको हालत ठीक यही छ ।
हुनत पार्टी सत्तामा रहनेहरु पार्टी संस्थापकहरुसँग लामो सानिध्यमा रहेका नेताहरु छन् । बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायत नेताको निकट रहेर काम गरेकाहरु नै छन् ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका त उनीहरु शिष्य नै हुन् । अधिकांश भट्टराई र कोइरालाले पार्टी र मुलुकको सत्ता चलाउँदाका सारथि हुन् । ती दुई नेताले पार्टी र सरकार चलाउँदाका विकृत पाटोलाई बोक्ने र मलजल गर्ने पनि यिनै हुन् । राम्रालाई छाडेर नराम्रा प्रवृत्ति र पद्धति अँगाल्ने दोष पनि यिनैको टाउकोमा छ । पार्टी सत्ताको घात प्रतिघातका प्रसारकको त आरोप नै छ ।
टिप्पणी गर्नेहरु वर्तमानको कांग्रेस नेतृत्व अघिल्ला पुस्ताका आर्जनमा रजाईं गर्नेहरु हुन् भन्छन् । बनाउनेभन्दा भत्काउने, समेट्नेभन्दा टुक्र्याउने शैली अख्तियार गर्दाको परिणाम नै वर्तमान कांग्रेसको आकार हो भन्छन् । यि भनाइलाई अतिशयोक्तिपूर्ण मान्नुपर्ने देखिन्न । पछिल्लो कांग्रेसको पार्टी सत्तामा रहने मध्ये एक जना सुशील कोइराला पनि हुन् । तर उनको देहान्त भैसकेको छ । माथिका गुणहरुको कारक र भागशान्तिचाहिं उनले पनि यथोचित बाँड्नै पर्छ ।
राणासँग लडेर देशभर एकछत्र स्थापना गरेको साख पञ्चायतसँग ३० वर्ष जुध्दा जुध्दा आधा आकारमा सीमित भयो । पञ्चायतको पतनपछि थालिएको सत्तायात्राले पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजानेभन्दा अधोगति मै पुर्याइदियो । सत्ताका लागि के गरिएन ? प्राडोपजेरो, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच, राज्यको ढुकुटीमा संस्थागत प्रहार । न्यायालयको मानमर्दन, सरकारका संरचनामा योग्यभन्दा आसेपासेको भर्ती, शासकीय पदहरुको सुक्रीबिक्री । यि सबै वर्तमानका नेतृत्वधारी नेताबाट नेपाली राजनीतिले पाएको दाइजो हो । जसमा आजको दुई तिहाईधारी कम्युनिष्ट राज चुर्लुम्म डुबुल्की मारिरहेको छ ।
देशैभर जरा गाडेर फैलिएको दुई तिहाईयुक्त कांग्रेस आज रुख काटिएर छाडिएको गिँड आकारमा छ । आफ्ना हर्कत र व्यवहारले जनताबाट टाढिँदा पनि होश फिरेको छैन । गूटग्रस्त धमिराले कांग्रेसको आत्मा निलिसकेको छ । चारतारे झण्डा र रुख प्रतीक कांग्रेसको जीवन जनजनबाट मेटाउन नेतृत्व र उनका शिक्षा पाएकाहरु नै काफी छन् । विभिन्न दरबारमा विभक्त गूट र तिनका उपासकले पार्टी जीवन जर्जर छ ।
आजको कांग्रेस शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, कोइरालाको मूल गूटमा विभक्त छ । तिनका पनि हाँगाहरु छन् । मूल गूटको प्राण त्यहीं टिकेको छ । तिनमा केसी, महत, सिंह, निधि, खड्का, खाँण, थापा, गच्छेदारलगायतका उपगूट छन् । अब त झन् यो गूटभन्दा पनि गिरोहका रुपमा विकास भैरहेका छन् पछिल्ला दिनमा । यो रोग केन्द्रमा मात्र छैन । जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै जरा गाडेर फैलिएको छ ।
बाह्रौं महाधिवेशन यता कांग्रेसको जीवन निष्प्राणतुल्य छ । सुशील कोइराला सभापति हुँदा उनैसँग पराजित देउवाले टाँङ अँड्याएर कामै गर्न दिएनन् । बल्ल बल्ल बनाइएका केहि संरचनामा पनि ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डाले पार्टीलाई दुई गूटको छायाँमा परिणत गरिदियो । यसैको परिणाम उपगूटका रुपमा गिरोहहरु जन्मिए ।
संस्थाहरु जित्नेले चलाउने, हार्नेले सघाउने सिद्धान्तमा चले मात्र जिवन्त हुन्छ । प्रजातन्त्रमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा स्वाभाविक हो । हार्नेले जित्नलाई कामै गर्न नदिने हो भने त्यस्तो घरमा एउटै चुलोमा भात खानुको के तूक ? कोइरालाले न त विभागहरु बनाउन सके न त सचिवालय वा भ्रातृ संगठनहरुको जिवन्तता नै । उनले सभापतिको पगरी त गुथिरहे तर पार्टी संगठन निष्प्राणतुल्य नै थियो ।
कुम्हालेको चक्र झै तेह्रौं महाधिवेशनमा देउवा पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो चरणमा हराएर जितका लागि चाहिने ५१ प्रतिशत मत कटाए । तर देउवा आज त्यहि रोगको शिकार भएका छन् । जुन सुशीलका समयमा आफुले गरेका थिए ।
पौडेल समूह हिजोको त्यहि हर्कत देखाउँदै लेनादेनाको खोजी गरिरहेको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्ने देउवाले विभाग र सचिवालय त कसरी निर्माण गर्लान् ? पौडेल समूहलाई पनि चेत भया कि, लबस्तरो ढंगले भागबण्डाको जुन माग गरिएको छ, भोलि यो आफ्ना अगाडी पनि गलपासो बन्ने निश्चित छ ।
संरचना कब्जाको लालसाले सबै भ्रातृ संस्था निकम्म्मा बनाइएका छन् । नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघदेखि अरु आवद्धसंस्थाहरुको संरचना कसले कब्जा गर्ने भन्ने एकमात्र ध्येय छ । तत्तत् संस्थाका हित होइन आफ्नो जि हजुरी गर्ने दासहरुको खोजी भैरहेको छ । कुनै भ्रातृ संस्थाको साख बाँकी रहेको छैन ।
महाधिवेशनको समय आयो भने त्यो रणभूमिका परिणत हुन्छ । आफै आफैमा काटमार र हानाहान । हुँदाहुँदा कांग्रेससँग आवद्ध भनिएका पेशागत शुभेच्छुक संस्थाहरुको हालत उस्तै बनाइएको छ । कांग्रेसभित्र विचार, बहस, छलफल र प्रशिक्षण शून्यझै भएको छ । वैचारिक प्रशिक्षणभन्दा धनोपार्जन मूल ध्येय छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा टिकट बाँडिएका पात्रहरुको अनुहार हेर्दा पार्टी राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर पैसा थुपार्ने पैसावाल, ठेकेदार, बिचौलियाहरुको अखडा बन्ने बाटोमा देखिन्छ । सर्वत्र निराशा बोकिरहेका समयमा कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको मुखमा ठिंग उभिएको छ । गन्तव्य हराएको बसाहझै चौरास्तामा उभिएको यस पार्टीको सामुन्ने जुन संक्रमण देखिँदै छ, के वर्तमानको कांग्रेसले त्यसलाई चिरेर सुनौलो भविष्यसहितको यात्रा तय गर्न सक्ला ?
वर्तमानको नेतृत्व त ब्याज खाएरै आफ्नो समय गुजार्दै छ । तर भविष्य खोज्ने कांग्रेसीहरु यो चित्र टुलुटुलु हेरिमात्र रहनेछन् कि, हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्छन् ? गूटबाट गिरोहमा गरिणत हुँदै गरेको रोगलाई अंकमाल गर्नेछन् कि जरैदेखि काट्ने कसम खान्छन् ? भावी नेतृत्वका लागि आशा गरिएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेललगायतको युवा पुस्ता कांग्रेसमा फैलँदै गएको क्यान्सर रोक्ने आँट गर्न सक्छ ?
चौधौं महाधिवेशनबाट जो जितेपनि तल्लो पुस्तामा नेतृत्व झार्न प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, बिमलेन्द्र निधि, शेखर कोेइराला, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँड गोलबन्ध हुने आँट गर्न सक्छन् ? वा पुरानै गूटको प्रदक्षिणा गरेर कांग्रेसको घाटयात्राको साक्षी बन्छन् ? यसैले नेपाली कांग्रेसको आगामी दिशा र दशा तय हुनेछ ।